चितवनमा संकटाले आर्मीको चुनौति पार लगाउँला ? | Hamro Khelkud
चितवनमा संकटाले आर्मीको चुनौति पार लगाउँला ?
भरतपुर (हाम्रो खेलकुद) – ए डिभिजन टोली सिएमजी संकटा क्लबका लागि यो सिजन भ्याइनभ्याइ रह्यो । चितवनको नारायणगढ र नवलपरासीको डण्डामा एकै समय आयोजना भएका दुई ठूला नकआउट फुटबल प्रतियोगितामाले संकटालाई खुवै दौडायो । ए डिभिजन क्लबहरुमा जमेका खेलाडीको संयोजनले बलियो बनेको संकटा भाग्यवश दुवै प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्यो । क्याम्पाचौरमा जारी १२ औं टुबोर्ग विकास रनिङ शिल्ड अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबलमा उपाधि जितको आशा कायमै छ । तर, शनिबारमात्र टोलीले नवलपरासीको कोल्हुवामा भएको राइनो गोल्डकप संरक्षण फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि उचाल्ने मौकाको भने उपयोग गर्न सकेन । त्यहाँको फाइनलमा संकटाले बी डिभिजन ब्याइज युनियनलाई २–१ नतिजा सुम्पियो ।
विकास रनिङ सिल्डको सेमिफाइनलमा लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मस्र्याङ्दीलाई हराएर उत्साहित संकटा फेरी एकपटक अर्को परिक्षामा उत्रदैछ । उपाधि भिडन्तमा आइतबार दिउँसो टोलीले नेपाल आर्मीको सामना गर्दैछ । यो बीचमा संकटाका खेलाडीले आराम पाएका छैनन् । राइनोको सेमिफाइनलदेखि लगतार चौथो दिन टोली मैदानमा सक्रिय छ ।
चितवनमा खेल्दा नवलपरासीको विश्राम र नवलपरासी खेल्दा चितवन विश्राममै बित्यो । बिहीबार नवलपरासीमा सेमिफाइनल जितेको भोलिपल्ट शुक्रबार चितवनमा मनाङलाई हरायो । फेरी शनिबार नवलपरासीमा फाइनल खेलेको भोली पल्छ आइतबार आर्मीका विरुद्ध उत्रदैछ ।
संकटाको विश्रामविनाको दौडधुपको फाइदा भने आर्मीले लिन सक्नेछ । आर्मीले बिहीबार सेमिफाइनलमा मोरङलाई हराएपछि विश्राममा छ । फाइनल पुग्ने दुई टोलीको तुलना गर्दा आर्मी यो प्रतियोगिताको भाग्यशाली टोली हा । पहिलो चरणमा वाई पाउँदै क्वाटरफाइनल आर्मीे प्रतियोगिताको एकमात्र टोली हो । क्वार्टरफाइनलमा टोलीले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई हरायो । त्यसपछि तुलनात्मकरुपमा कमजोर मोरङलाई २–० ले हराएपछि आर्मी फाइनल पुग्यो । संकटाको यात्रा भने त्यो लामो रह्यो । पहिलो खेलमा भारतको खर्साङ, दोस्रोमा झापा–११ र सेमीफाइनलमा मनाङको चुनौती पन्छाएर संकटाले फाइनलमा स्थान बनाएको थियो ।